Akụkọ - Kedu ihe dị iche n'etiti akụrụngwa mkpochapụ uzuzu ụlọ ọrụ na ụzọ iwepụ uzuzu?
Akụrụngwa na-ewepụ uzuzu ụlọ ọrụ Ngwa nke na-ekewa uzuzu ụlọ ọrụ na gas flue bụ nke a na-akpọ onye nchịkọta uzuzu ụlọ ọrụ ma ọ bụ ngwa iwepụ uzuzu ụlọ ọrụ.A na-egosipụta arụmọrụ nke onye na-emepụta ihe na ọnụ ọgụgụ nke gas nwere ike ijikwa ya, nkwụsị nkwụsị na mkpofu uzuzu mgbe gas na-agafe na mmiri.N'otu oge ahụ, ọnụahịa nke onye na-anakọta uzuzu, ụgwọ ọrụ na nrụzi, ọrụ dị mkpirikpi ma dị mfe na njikwa bụkwa ihe ndị dị mkpa iji tụlee arụmọrụ ya.
Site na mmepe ngwa ngwa nke akụ na ụba, akụrụngwa na-ekewapụta uzuzu sitere na gas flue bụ nke a na-akpọ onye na-anakọta uzuzu ụlọ ọrụ ma ọ bụ ihe mkpofu uzuzu ụlọ ọrụ, na usoro iwepụ uzuzu bụ naanị nka.
Akụrụngwa na-ewepụ uzuzu ụlọ ọrụ gụnyere nzacha akpa, ihe na-anakọta uzuzu katrij, na ihe ọkụ eletrik.Iji chekwaa ikike mmadụ na akụrụngwa, yana kwalite njide ụmụ irighiri ihe, a na-ejikọta ọtụtụ usoro iwepụ uzuzu, dị ka nzacha akpa na nchacha mmiri.ọhụrụ uzuzu uzuzu.
Ihe dị iche n'etiti ngwá ọrụ mkpochapụ uzuzu ụlọ ọrụ na ụzọ iwepụ uzuzu dị na ụkpụrụ.Usoro iwepụ uzuzu na-ejikọta ya na ike ndọda, inertia, separators cyclone na akpa akwa.
Oge nzipu: Eprel-17-2022
Onye na-anakọta uzuzu simenti, Ihe nzacha ákwà mgbochi ikuku ikuku, Electro-Magnetic Pulse Valve, Ihe nzacha akpa ụlọ ọrụ, Elektrostatik Precipitator, Electrostatic precipitator na-eji,